Kenya oo xirtay Xawaalado ay Soomaali leeyihiin – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare 21 May 2019 21 May 2019
Dowladda Kenya ayaa xilligaan wado isku-day ku aadan inay Soomaaliya saarto cadaadis dhaqaalo iyo mid Siyaasadeed, iyada oo uu sii xoogeystay khilaafka u dhaxeeya labada dowladood oo ka bilaawday muranka la xiriira dhinaca Badda.
Kenya ayaa 24kii Saac ee la soo dhaafay waxaa ay qaaday laba tallaabo oo lagu xagaal daacinayo dadka Soomaaliyeed,waxaana ay mudo ku xayirtay garoonka Nairobi Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan dowladda Federaalka.
Iyada oo taasi ay jirto ayaa hadana wararka aan Nairobi ka heleyno waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Booliska Kenya ay xireen Xawaalado ay Soomaali leeyihiin oo ka howlgalla dalkaas,sida uu xaqiijiyay mid ka mid ah Soomaalida ku nool dalkaas.
Ciidamada Kenya ayaa Xarumaha Shirkadaha Xawaaladaha Soomaalida ay xireen ayaa waxaa ka mid ah Xawaalaaha Amal iyo Taaj,waxaana mid ka mid ah soomaalida ku nool dalkaasi uu sheegay in amar kasoo baxay Booliska Kenya lagu xiray.
Kenya ayaa xilligaan u muuqata mid Soomaaliya ku saareysa cadaadis farabadan si looga laabto dacwada dhinaca Badda ah oo u dhaxeysa labada dowladood,hayeeshee Madaxda Dowladda ay sheegeen in taako ka mid ah dhulka Soomaaliya aan gorgortan laga galeyn.